Isbarbar dhiga sinnaanta xirfadeed: waa waajibaad soo kordha sannad kasta oo sii kordha
Haddii shirkaddaadu leedahay ugu yaraan 50 shaqaale, waxaad u baahan tahay inaad cabirto farqiga u dhexeeya mushaharka u dhexeeya haweenka iyo ragga iyo tilmaamayaasha.
Waajibaad aan cusbayn - maadaama aad horeyba u lahayd inaad sameyso sanadkii hore - laakiin soo noqnoqda sannad kasta.
4 ama 5 tilmaame ayaa la tixgelinayaa iyadoo kuxiran shaqaalahaaga. Hababka loo xisaabiyo tilmaamayaasha waxaa lagu qeexay lifaaqyada:
Markasta oo shirkaddaadu wax ka qabato tilmaamayaasha, dhibcaha badan ee ay hesho, tirada ugu badan waxay noqoneysaa 100. Ogaanshaha haddii heerka natiijooyinka la helay uu ka yar yahay 75 dhibcood, waxaa lagama maarmaan ah in la hirgeliyo tallaabooyinka sixitaanka iyo haddii ay sidaas tahay soo qabashada mushaharku gudaha 3 sano.
Marka xisaabinta la sameeyo, waa inaad markaa:
ku daabac heerka natiijada ("tusmada") boggaaga haddii uu jiro mid ama, haddii taa la waayo, u soo bandhig shaqaalahaaga; oo aad ula socodsiiso kormeerka shaqada iyo sidoo kale guddigaaga bulshada iyo dhaqaalaha.
Haddii aad shaqaalayso in ka badan 250 qof natiijooyinkaaguna sidoo kale way noqon doonaan
Tusmada sinnaanta xirfadeed: fidinta guriga si loo sameeyo! July 10th, 2021Tranquillus
READ Tababbarka MS PowerPoint 2016: Hesho aasaaska
horeXaq miyaan u leeyahay in aan waqtiga ku dhejiyo shaqaalaha xirmo maalmeed?
socdaArdayda: dooro barnaamijka barashada shaqada